သင့်ရဲ့ EA ရိုဘော့ကို သုံးပြီး လော့များနိုင်သမျှများများရအောင် စက်တင်ဘာ ၃ရက်နေ့မှ စတင်ထရိတ်လိုက်ပြီး FBSမှ အံ့အားသင့်ဖွယ်ဆုလက်ဆောင်များစွာကို ရယူလိုက်ပါ:
အနိုင်ရရှိဖို့ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ? သင့်ရဲ့ EA ရိုဘော့ကို သုံးပြီး လော့များနိုင်သမျှများများရအောင် ထရိတ်လိုက်ပြီး FBSမှ ချီးမြှင့်မည့် ဆုလက်ဆောင်များကိုရယူဖို့ စောင့်နေလိုက်ပါတော့. သတိပြုရန်မှာ ရိုဘော့နှင့်သာ ထရိတ်ရမှာပါ.
၂၀၁၇ သြဂုတ်လ ၂၈ရက်နေ့မှစတင်ပြီး စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ, အားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်. ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အချိန်ဆွဲမနေပါနှင့်!